musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Trinidad neTobago Breaking News » Tourism Trinidad Kuisazve simba neNew Man in Charge
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trinidad neTobago Breaking News
Nyowani Tourism Tourism Trinidad CEO
Tourism Trinidad Limited (TTL) ichangobva kuzivisa kudomwa kweMutungamiriri Mukuru wesangano. Kurtis Rudd akatumidzwa semurume mutsva anotungamira, anoshanda mazuva maviri apfuura munaGunyana 2, 20.
Iyi yanga iri imwe yenguva dzakaomesesa mukufamba kweTrinidad uye nhoroondo yekushanya, uye hutungamiriri hutsva hunodiwa kubatanidza chikamu.
Neshungu dzeupenyu hwake hwese hwekuvaka mhando uye nerudo rusingadzorwi rwenyika, Kurtis Rudd akagara achitsvaga kuve wekushandira nyika yekuzvarwa kwake.
Rudd akati anodada kupiwa basa rekusimudzira zviwi zvekushanya pachitsuwa ichi.
Kurtis Rudd anounza pamusoro pemakore makumi maviri nemashanu ezviitiko zvevakuru manejimendi pamwe nekushambadzira kwakawanda, kutaurirana zvine hungwaru, uye hunyanzvi hwehutungamiriri hunobatsira Tourism Trinidad sezvo ichisimbisazve hupfumi hwekushanya pachitsuwa ichi. Iyi yanga iri imwe yenguva dzakaomesesa mukufamba kweTrinidad uye nhoroondo yekushanya, uye hutungamiriri hutsva hunodiwa kubatanidza chikamu uye kutsanangura nzira yakajeka yekutangisa kwakachengeteka kwekufamba kwenyika dzese.
Neshungu dzeupenyu hwake hwese hwekuvaka mhando uye nerudo rusingadzorwi rwenyika, Kurtis Rudd akagara achitsvaga kuve wekushandira nyika yekuzvarwa kwake. Akabata zvigaro zvepamusoro zvevatariri nemakambani anotungamira emunharaunda muno uye muCaribbean anosanganisira Shell Caribbean, Prestige Holdings Limited, Courts Trinidad Limited, uye Guardian Life.
Mukubvuma kugadzwa uku, Kurtis Rudd akati: “Ndinodada nekujoinha vakasiyana uye vane tarenda Tourism Trinidad timu yakapihwa basa rekusimudzira yakasarudzika uye inoshamisa zvinhu zvekushanya zveichi chitsuwa chedu kune nyika dzese. Tiri panguva yakaoma mukukudziridzwa kweindasitiri yeTrinidad yekushanya, uye tinoda kubatana kwakabatana kweakazvimirira uye vehurumende kuti vashandise mikana yemisika iri pamberi uye kubuda mudenda iri. Ndiri kufara kuva nemukana wekushanda neBhodi revatungamiriri, rinotungamirwa naCliff Hamilton. Tine rombo rakanaka kuva nemumwe munhu ane hunyanzvi hwakadai uye neruzivo rwekushanya pasirese kutungamira sangano. ”
VaRudd vakapedzisa vachiti, "Iri zvirokwazvo ibasa rangu rekurota, uye ndiri kutarisira kushanda nebazi rezveKushanya, tsika nemagariro, pamwe nevese vane chekuita nekuumba pamwe nekufambisa hurongwa hwebazi rezvekushanya kuti riwane kugadzikana kwenguva refu pamwe nekusimudzira kusanganisa. . ”
Iye akapedza kudzidza kuFatima College, Kurtis Rudd akabata Master of Business Administration (MBA), General Management kubva kuHenley Management College, UK, uye mudzidzisi mukuru kuUWI-ROYTEC. Akaroora kwemakore makumi maviri nemashanu, Kurtis Rudd akaita bhizimusi rinomhanya-mhanya riine hupenyu hwemhuri uye anotenda zvakasimba mukuenzanisa hupenyu hwehupenyu hwake nehunyanzvi basa.
Svondo 23, 2021 pa 09: 28
Iwe unofanirwa kuratidza yakadhindwa kana yemagetsi kopi kunhandare yendege kuti ukwire ndege yako. Mhedzisiro yeiyo ndiko kunakidzwa kwekushanya kwevashanyi kune veko munzvimbo zhinji dzeCaribbean.